खुशीको खबर ! लिपुलेक जाने बाटो निर्माणको आधा काम सकियो ! – Nepal Insider
मुख्य पृष्ठ /समाचार/खुशीको खबर ! लिपुलेक जाने बाटो निर्माणको आधा काम सकियो !
काठमाडौं, साउन ६ । नेपाली सेनाले भारतले अ’तिक्रमण गरेको नेपाली भूमि लिपुलेक जाने वाटो निर्माणको आधा काम सकेको जानकारी दिएको छ । नेपाली सेनाका प्रवक्ता सन्तोष बल्लभ पौडेलले सोमवार ट्वीटमार्फत लिपुलेक जाने बाटो निर्माणको आधा काम सकिएको जानकारी दिनुभएको हो । लिपुलेक जाने ट्रयाक खोल्न सेनाको एक टुकडी केही समयदेखि सो स्थानमा कार्यरत रहेको छ ।
प्रवक्ता पौडलले सेनाका जवानले बाटो खन्दै गरेको तस्विर समेत सार्वजनिक गर्दै ट्रयाक निर्माणको अहिलेसम्मको प्रगतिको बारेमा जानकारी गराउनु भएको हो ।प्रवक्ता पौडेलका अनुसार घाँटीबगरदेखि घागंरुसम्मको ट्रयाक खोल्ने क्रममा २ सय ५० मीटर ट्रयाक खोलिसकिएको छ । प्रवक्ता पौडेलले स्थलगत तस्बिर र नक्सा सार्वजनिक गर्दै सो समाचार सेयर गर्न पाउँदा खुसी लागेको आफ्नो अनुभुति समेत साटनुभएको छ । उहाँका अनुसार सो सडकखण्डको पुरा ट्रयाक ४५० मीटर रहेको छ ।
केही समय अघि प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा र सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनालले सो क्षेत्रको भ्रमण गर्नुभएको थियो । सेना र सशस्त्र प्रहरी प्रमुखद्वय त्यहाँ कार्यरत सुरक्षाकर्मीको आत्मबल बढाउन सो क्षेत्रको भ्रमणमा जानुभएको हो । भारतबाट अतिक्रमित भूमि समेटिएको नयाँ नक्सासहितको संविधान संशोधन संसदबाट पारित भएपछि नेपालको सिमा क्षेत्रमा सुरक्षा बढाईएको छ । सुरक्षा क्षेत्रका प्रमुखहरुको भ्रमणले पनि छुट्टै सन्देश दिएको थियो ।
नेपाली सेनाले ट्रयाक खोल्नु र दुई सुरक्षा निकायका प्रमुखको भ्रमणलाई भारतीय मिडियाले पनि निकै चासोका साथ हेरेका थिए । जुन परिवेशमा भ्रमण भएको थियो, त्यसले कुटनीतिक तथा सामरिक दुवै तहमा एउटा सन्देश प्रवाह गरेको अनुभुती गरिएको थियो । यो विषयले मिडिया र सामाजिक संजाललाई पनि तरंगित गर्‍यो। भारतीय मिडियामा समेत यो भ्रमणको पर्याप्त चर्चा भयो भने उत्तरतिरबाट पनि यसमा चासो प्रकट भएको थियो।